Myanmar All Sim Register (MPT, Telenor, Ooredoo, MecTel)
Myanmar All Sim Register App!
Registration you sim Free with this app.
You can register all Myanmar sim Card, MPT, Telenor, Ooredoo, MecTel
Very simple useful App.
You can Feedback anything
If you have any problem in this app Please contact me.
@>>> Facebook <<<@
@>>> Email <<<@
Click Download Button Below to Started Download :)
if you want to register Telenor Myanmar SIM Card ?
1. Install Myanmar All Sim Register App and Open it.
2. Click "Telenor" button! now, you will redirect to Telenor Sim Registration Page.
3. After, follow up introduction in Their Website.
if you want to register MPT Myanmar SIM Card ?
if you want to register Ooredoo Myanmar SIM Card ?
Please Invite your friends For Register Their SIM Cards with This App!
Click Share icon For Sharing This App!
You can share with Shareable Apps!
Thanks For Using My App :)
Posted by lin linn at 3:51 AM
ကား/ဆိုင်ကယ်တိုင်း တပ်ထားသင့်တဲ့ Myan Track Pro - Multi-Functions GPS Tracker
ကား/ဆိုင်ကယ် ပျောက်မှာ စိုးရိမ်နေတဲ့ ကား/ဆိုင်ကယ် ပိုင်ရှင်တွေ၊ ကားအများကြီးကို ထိန်းချုပ်ရတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ၊ သား/သမီးတွေ ဘယ်သွား၊ ဘယ်လာတယ်ဆိုတာ သိချင်တဲ့ မိဘအုပ်ထိန်းသူတွေအတွက် တန်ဖိုးနည်းပြီး Function စုံလင်စိတ်ချရတဲ့ ပစ္စည်းလေးတစ်ခုကို တပ်ဆင်ထားရုံနဲ့ စိတ်အေးရပါပြီ...
Q - MyanTrackPro ဆိုတာ ဘာလဲ
A - ကား၊ ဆိုင်ကယ်နဲ့ ရွှေ့လျားနေတဲ့ ယာဉ်တွေမှာ တပ်ဆင်အသုံးပြုရတဲ့ Electronic Device လေး တစ်ခုပါ။
Q - တပ်ထားပီး ဘာတွေလုပ်လို့ ရလဲ
A - တပ်ထားတဲ့ ယာဉ် ဘယ်နားရောက်နေလဲဆိုတာကို ၂၄နာရီလုံး အင်တာနက် ဒါမှမဟုတ် Phone Message ကနေ ကြည့်လို့ ရနေမှာပါ။
Q - အထဲမှာ ဖုန်းကဒ် ထည့်ထားဖို့ လိုသလား
A - ဖုန်းကဒ် ထည့်ထားရမယ့်အပြင် ဖုန်းကဒ်မှာလဲ ဘေလ်ရှိနေရမှာပါ။
Q - ဖုန်းဘေလ် ကုန်တာ မြန်သလား
A - ပုံမှန် အင်တာနက်က ကြည့်ဖို့အတွက်က တစ်လကို ၁ ထောင်လောက်ပဲ ကုန်မှာပါ။ Phone Message တွေ သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ပုံမှန်ထက် ပိုပီး အကုန်အကျ များပါလိမ့်မယ်။
Q - ဘယ် ဖုန်းကဒ်တွေ သုံးလို့ ရသလဲ
A - 2G Internet ရတဲ့ ဘယ်ဖုန်းကဒ်ကို မဆို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ (ဥပမာ Telenor နဲ့ MPT ပါ။ Ooredoo ကို အသုံးပြုလို့ မရနိုင်ပါ။ )
Q - ဖုန်းနဲ့ တက်ပလက်တွေပေါ်က ကြည့်လို့ ရသလား
A - Android နဲ့ iOS အတွက် Application တွေရှိပါတယ်။ အဲဒီပေါ်မှာ ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
Tracker Device အသုံးပြုနေတဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက်
Computer ကနေ Browser သုံးပီး ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်
Username Password ရိုက်ထည့်ပီး သုံးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
တစ်ကယ်လို့များ ဖုန်းပေါ်ကနေ ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့
Android Phone တွေအတွက်
ကို ဒေါင်းပီး ကြည့်နိုင်ပါတယ်
iOS အသုံးပြုတဲ့ iPhone, iPad အတွက် ဆိုရင်တော့
ကိုသွားပီး iTune Store ကနေ တိုက်ရိုက်ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Q - ကွန်ပျူတာကနေကြည့်ရင်ရော ဘာတွေ ထူးလာမှာလဲ
A - ကားတစ်စီးချင်းရဲ့ မောင်းနှင်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်း၊ မောင်းနှင်နေတဲ့လမ်းကြောင်း၊ မောင်းချိန်၊ ရပ်ချိန်၊ စက်နှိုးထားချိန် စတဲ့ အသေးစိတ် Report တွေ ကြည့်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။
နမူနာကို https://goo.gl/4Z6hvL မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်...
Q - ကားတစ်စီးကို အကောင့်တစ်ခုနဲ့ ကြည့်ရမှာလား
A - အကောင့်တစ်ခုထဲမှာတင် ယာဉ်အားလုံးကို ကြည့်နိုင်တာ ဖြစ်လို့ အကောင့် အများကြီး မလိုပါဘူး။
Q - ၂၄ ဗို့သုံးတဲ့ ကားကြီးတွေနဲ့ ဘက်ထရီဆိုင်ကယ်တွေမှာ တပ်လို့ ရလား
A - ၁၂ဗို့ကနေ ၈၀ဗို့အထိ သုံးလို့ ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကားကြီးကားလေး အကုန် တပ်လို့ ရပါတယ်။ ဘက်ထရီဆိုင်ကယ်တွေအတွက်ကတော့ မီးထွန်းတဲ့ လိုင်းကကြိုးကို ယူတပ်လို့ ရပါတယ်။
Q - ဈေးကရော ဘယ်လောက်လဲ
A - လက်လီဈေး တစ်ခုကို ငါးသောင်းခွဲပါ။
Q - တပ်ဆင်ရတာလွယ်ကူလား
A - အရမ်းကို လွယ်ကူ ရိုးရှင်းပါတယ်။ စုစုပေါင်း ကြိုး ၄ ချောင်းပဲ ပါတာပါ။
အနီနဲ့ အနက်က ဘက်ထရီရဲ့ အပေါင်းနဲ့ အနှုတ်ကို တပ်လိုက်ရင် ရပါပီ။
လိမ္မော်ရောင်ကြိုးကတော့ ကား/ဆိုင်ကယ် စက်နှိုးထားလား မနှိုးထားလား သိရအောင် သော့ဖွင့်တဲ့ ကြိုးကနေ တပ်ယုံပါပဲ။
အဝါရောင်ကြိုးက Basic Package မှာ မသုံးပါဘူးခင်ဗျာ။ Advance Package တွေမှာ သုံးတဲ့ ကားစက်ရပ်တဲ့ Function ကို သုံးဖို့အတွက်ပါ။
ကိုယ်တိုင် မတပ်ချင်တဲ့သူများအတွက် ဒီပုံလေးကို ဝါယာရင်း ဆရာကို ပြလိုက်တာနဲ့ သူတို့ ကောင်းကောင်း သိပါပီ။
Q - ဘယ်လို Setup လုပ်ရမလဲ
A - ပစ္စည်းကို ကား/ဆိုင်ကယ်တွေမှာ တပ်ပြီးသွားရင် ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ Message Code တွေပို့ပြီး Setup လုပ်လို့ရပါတယ်.. Setup လုပ်နည်း ကတော့ https://goo.gl/fTiuUv မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်.. ဒါမှမဟုတ် http://pc.cd/cn4otalK မှာ pdf ဒေါင်းပြီးကြည့်နိုင်ပါတယ်..
Q - History ကို ဘယ်လောက်ထိ ပြန်ကြည့်နိုင်မှာလဲ.
A - တကယ့်အသွားအလာများတဲ့ ကားတွေကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လလောက်ထိ History ကို ပြန်ကြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး သာမန် အိမ်သုံးကားတွေကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ လလောက်ထိ History ကို ပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်...
Q - အာမခံရှိသလား။ ပျက်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ပေးမှာလဲ။
A - အာမခံသက်တမ်း တစ်နှစ်ပေးထားပါတယ်။ ထုတ်လုပ်မှုအမှားကြောင့် ပျက်စီးမှုအားလုံးကို တစ်နှစ်အတွင်း အသစ်တစ်ခု လဲလှယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သုံးစွဲသူအမှားကြောင့် ပျက်စီးမှုများကိုလဲ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြန်လည် ပြင်ဆင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Q - အသေးစိတ်သိချင်ရင် ဘယ်ကို မေးရမလဲ...
A - www.facebook.com/www.maungpauk.org ကို Add ပြီး Facebook ပေါ်က မေးနိုင်သလို 09440225635 နဲ့ 09974701800 ကို ဖုန်းဆက်မေးလို့ရပါတယ်။.
Posted by lin linn at 1:56 AM
Log in ၀င်လိုက်ယုံနဲ့Facebook ထဲကဗီဒီယိုတွေကို အမြန်ဆုံးဒေါင်းယူနိုင်တဲ့ FB Video Download Free 1.0.1 APK
ဖုန်းဖြင့် Facebook ထဲက Video တွေကို ဒေါင်းယူချင်သူများတွက် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ fb video download လေးဖြစ်ပါတယ်။အသုံးပြုမယ်သူများအောက်မှာဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်ပါတယ်။
Posted by lin linn at 1:52 AM
♪ ဖုန်းထဲမှာတင် DJ Mix ဖန်တီးချင်သူများပွတ်ချင်သူများအတွက် - Cross DJ Pro v3.1.2 Apk (Dec-23) ♫
မိမိဖုန်းမှာ DJ Mix ဖန်တီးချင်သူများအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ DJ Bar တွေမှာ ပွတ်သလိုမျိုး အမှန်အကန်ဆွဲနိုင်မှာပါ။ ဒါ့အပြင် မိမိကိုယ်တိုင်လည်း အခြားသော အသံများစွာနဲ့ Remix လုပ်ပြီး DJ ဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ DJ effects (FX): Cue, Flanger, Loop, Echo, equalizer စသည်တို့ ပါဝင်သည့်အပြင်recording ပါပြုလုပ်နိုင်တဲ့ Full Free လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Pro DJ effects ဖြစ်တဲ့ Cue, Flanger, Loop, Echo, Equalizer တွေပါဝင်ပြီး Recording ကတော့ quality ကောင်းမွန်ပြီး wave format အဖြစ် 1 hour ထိတောင် mp3 files အဖြစ်ရရှိပါမယ်။ Android: 4.0 နှင့်အထက်ကစပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မိမိကြိုက်သလို အသံတွေရော သမမွှေပြုလုပ်လို့ရပါ တယ်။ အောက်မှာပုံတွေပြထား ပါတယ်။
Posted by lin linn at 1:49 AM
♪ ဓါတ်ပုံတွေ Effect အလန်းဆုံးတွေနဲ့အမိုက်စားဖြစ်အောင် Edit လုပ်နိုင်မယ့် - B612 – Selfie from the heart v5.3.1 Apk (Dec-21) ♫
မိမိ ဖုန်းထဲ့မှာ ဓာတ်ပုံနှင့်တွေကို အလှပဆုံးဖြစ်အောင် အကောင်းဖန်တီးပြုပြင်ပေးနိုင်တဲ့ B612 – Selfie from the heart v5.3.1 Apk လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီကောင်လေးကို နိုင်ငံတကာမှာ လူသုံး အများဆုံး ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုအတိုလေးတွေကို အလှပဆုံးရိုတ်ကူနိုင်တဲ့ Application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုတ်တဲ့အခါမှာ ပုံရိပ်များကို အကြည့်လင်ဆုံးဖြစ်အောင်ရိုတ်ကူးနိုင်ယုံသာမကဘဲ ထက်သာလွန်တဲ့ ဖက်ရှင်တွေနဲ့ ရိုတ်ကူးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့် Selfie ရိုတ်လေ့ရှိကြတဲ့ လူပျိုချောအပျိုချောများ တွက်အရမ်းကိုအဆင်ပြေစေမှာအမှန်ပါဘဲ..။ စမ်းသပ်အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ နမူနာ အနေနဲ့အောက်မှာ Screen Shoot တွေရိုက်ပြထားပါတယ် ။ Android OS Version 2.3 နှင့်အထက် ရှိထားတဲ့ဖုန်းတွေပေါ်မှာ Installလုပ်၍အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by lin linn at 1:47 AM
Youtube Video များကို Software မသုံးပဲ MP3 Audio အဖြစ် ဒေါင်းယူနည်း
ကွန်ပျူတာကနေ Youtube Video များကို Software မသုံးပဲ MP3 Audio အဖြစ် ဒေါင်းယူနည်းပါ...
အဆန်းတော့မဟုတ်ပေမဲ့... တခါတရံ လိုအပ်လာတတ်ပါတယ်... Firefox Browser နဲ့ Opera Browser တေတွမှာ Download MP3 Addon လေး ထည့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ Link ကို Copy ကူး နောက်တခါ Convent လုပ်ပေးရတဲ့ နည်းလမ်းတွေထက် အဆင်ပြေစေတာမို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်..။
အောက်ပါ Link မှ တဆင့် သက်ဆိုင်ရာ Browser ကို ထည့်ပေးပါ..။
Download MP3 Addon For Firefox Browser
Download MP3 Addon For Opera Browser
"ပထမ နိုင်ငံတော်" သီချင်းကို ဒေါင်းယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့
Posted by lin linn at 1:43 AM
ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ဖေ့ဘုတ်အကောင့်ကို Gmail Acc နဲ့ ပြောင်းနည်း
ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ဖေ့ဘုတ်အကောင့်ကို Gmail Acc နဲ့ ပြောင်းနည်းကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီအတွက် Facebook မှာ မသုံးရသေးတဲ့ Gmail Acc တစ်ခုတော့ရှိရပါမယ် အသစ်ချင်လည်းဖွင့်လို့ရပါတယ။ ဒါဆို ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ဖေ့ဘုတ်အကောင့်ကို Gmail နဲ့ ပြောင်းရန် ScreenShot ပုံများဖြင့် လက်တွေ့ ရှင်းပြထားတာကို အောက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဖုန်းဖြင့် Gmail Account အသစ်ဖွင့်နည်း
Posted by lin linn at 3:56 AM